विरामी अस्पतालमा रोकिए, ताला लगाएर डाक्टर भागेपछि… – Hamropahuch
खलंगा, १९ वैशाख । बिरामीहरुको चेकजाँच गर्न छोडेर जिल्लाको छेडागाड नगर अस्पताल बन्द गरेर डाक्टर भागेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटद्धारा जिल्लामा गरिएको लकडाउन (निषेधाज्ञा) को कारण देखाएर नगर अस्पताल बन्द गरेर डाक्टर भागेका हुन् । छेडागाड नगर अस्पतालमा कार्यरत डा. बिष्णुनाथ शर्माले अस्पताल बन्द गरेर भागेपछि उपचार गर्न अस्पतालमा पुगेका बिरामीहरु अलपत्र परेको स्थानीय नरेश थापाले जानकारी दिए ।
कोरोना परिक्षण गर्न मनघाट पुगेका डा. शर्माले अस्पतालका सबै शाखामा किन ताला लगाए ?, बिरामीहरुको पुर्जी नकाट्नु भनेर अन्य कर्मचारीलाई किन निर्देशन गरे भन्ने बिषयमा भने, नगर प्रमुख महतराले केही पनि बोलेका छैनन् । स्वास्थ्य सेवालाई नै प्रभावकारी बनाउनका लागि जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको जानकारी दिदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद देवकोटाले बन्द गरिएको नगर अस्पताललाई तत्काल खोलेर सेवा संचालन गर्न निर्देशन गर्ने बताए । #स्रोत : डिजिटल सञ्चार#